Afaka malemy ve ianao amin'ny gymnastics? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Nalemy ny gymnastasy - valiny manoloana ireo olana
Nalemy ny gymnastasy - valiny manoloana ireo olana
Afaka malemy ve ianao amin'ny gymnastics?
Rahovianafanatanjahan-tenalasa mampidi-doza loatra
Mazava ho azy, ratra mahatsiravina toy nynalemydia tsy fahita firy. Fa marogymnastmijaly maratra marobe rehefa manandrana ny fetran'ny hery misintona sy ny fizika. Manodidina ny 100.000gymnastiharan'ny ratra isan-taona, hoy ny University of Pittsburgh Medical Center.
fahitana fararano mafy
Nisy olona efa maty ve nanao gymnastika?
Julissa D'Anne Gomez dia Amerikana mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia teraka ny 4 Novambra 1972 8 Aogositra 1991mpanao fanatanjahan-tenaizay miakatra haingana amin'ny laharan'ny elitefanatanjahan-tenaTamin'ny tapaky ny taona 1980 dia tapaka ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny 1988 izay namela quadriplegic ho azy. FaranyMATYtamin'ny ratra nahazo azy.
Manana olana amin'ny lamosina ve ny gymnast any aoriana any?
mitaizafanaintainana, indrindramarary lamosina, dia zavatragymnasttraikefa, na dia azo tantanana amin'ny alàlan'ny fanarenana sy fitsaboana ara-pahasalamana tsy tapaka aza izany. 'Nefa ny ankamaroany talohagymnastmitazona karazana fanazaran-tena fampiofanana ho an'ny sisa aminyfiainana.
Maratra be ve ny gymnast?
iraisanaRatra amin'ny gymnastika: Fitsaboana sy fisorohana.fanatanjahan-tenamanana iray amin'ny avo indrindraratraisa amin'ny fanatanjahantena zazavavy, miaraka amin'ny 100000 eo ho eogymnast naratraisan-taona. Raha ampitahaina amin'ny 20 taona lasa, tanora atleta: Atombohy amin'ny taona mbola kely.
Mbola afaka miarina ve ny lehilahy malemy?
indrindralehilahy malemymahayeFAreflexlevitramiaraka amin'ny fanentanana ara-batana raha tsy hoe simba ny lalan'ny S2S4. Spasticity dia fantatra fa manelingelina ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny olona sasany misy SCI.
Ahoana no ataon'ny olona malemy?
Ity toe-javatra ity dia fantatra koa amin'ny reflex bowel. Ny tsinay neuron ambany dia vokatry ny ratra eo ambanin'ny T-12 izay manimba ny reflex de malàka ary mampihena ny hozatry ny sphincter anal. Rehefa feno ny tsinainyfipetrahanyny hozatry ny sakramenta dia manandrana mandefa famantarana any amin'ny tadin'ny hazon-damosinafahalotoanafa ny ratra kosa manelingelina ny famantarana.
Gymnast inona no maty vao tsy ela akory izay?
Dianne Durham, vehivavy mainty hoditra voalohany nahazo ny Etazoniafanatanjahan-tenaTompondaka tamin'ny firenena, izay nolavina ny fitifirany tamin'ny Lalao Olaimpika noho ny ratra tsy nampoizina,MATYamin'ny 4 Febroary any Chicago. 52 taona izy.
Fa maninona ireo gymnast no tsy tratra?
Amenorrhea infanatanjahan-tenadia nolazaina fa fitambaran'ny sakafo fatratra sy fiezahana mafy; hypothèse iray hafa dia ilay hoe mamelana tampokagymnastmankanesa amin'ny fanatanjahan-tena mety aminy. Dr. Aurelia Nattiv avy amin'ny UCLA dia nilaza fa ny fanatanjahan-tena mahery vaika sy fanamafisana ny fahatanoran'ny vatana ambany dia fahatanorana.11.08.1996
Fa maninona ireo gymnastianina efa misotro ronono no matavy?
'Ara-dalàna izany. rehetragymnast dia mahazo lanjarehefa avy nijanona. Nandritra ny fifaninanana dia naka vitamina izahay hanonerana ny tsy fahampian'ny sakafo sasany. Rehefa tsy takiana intsony ny mihinana pilina, dia tokony hanome toky ny fihinanana vitamina isika amin'ny alàlan'ny sakafontsika, toy ny olon-drehetra ihanyno. '
Fa maninona no fohy dia fohy ny gymnast?
Noho ny antony izaygymnastdia ny ankamaroanyfohy. Ilay fohy ampanao fanatanjahan-tenadia, mora kokoa ho azy ireo ny mihodina amin'ny rivotra na mihodina amin'ny hafainganam-pandeha. Sarotra amin'ny rantsam-batana sy ny tonon-tongotra lava ny miatrika fiofanana mahery. Azo hazavaina koa izy amin'ny alàlan'ny fitandremana lalànan'ny fizika ao an-tsaina.27. 2021.
sakafo sakafo thermic
Iza ilay gymnastasy sinoa nalemy hatramin'ny tratra ka hatrany ambany?
Sang Lan, gymnastis sinoa iray nalemy avy teo amin'ny tratrany ka nianjera tamin'ny mpamaky vault amin'ny Lalao Goodwill 1998 tany New York. Miaro ny sembana ao Shina izy. Miniseries sinoa iray no novokarina momba ny fiainany, nilalaovan'i Mo Huilan gymnast namany.
Ahoana no nalemy ilay mpanao fanatanjahan-tena?
Ny zava-drehetra dia norefesina tamin'ny ambaratonga tsara indrindra - ny fihazakazahana, ny fitsambikinana, ny fihodinana ary ny somersault ary ny fipetrahana teo an-damosiny tamin'ny fipetrahan'ny tsihy dia tonga lafatra. Faly tamin'ny zava-bitany, dia lasa izy niady ho an'ny fanaovana spaoro nahafaly hafa teo amin'ny vault. Saingy tsy afa-nihetsika ilay tompon-daka amin'ny gymnastika Irlandy Avaratra.
Oviana no fotoana farany nahafatesan'ny gymnast iray?
Na dia tsy fahita firy aza ny fahafatesan'ny gymnastika dia nitranga izany taloha. Tamin'ny taona 1988, Julissa Gomez, 15 taona, dia nalemy taorian'ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ny vava. Maty noho ny fahasarotana tamin'ny ratra nahazo azy, telo taona taty aoriana. Gymnast 100 000 eo ho eo no maratra isan-taona, hoy ny University of Pittsburgh Medical Center.